Dowladda Puntland oo socdaal muhiim ah ku tilmaantay safarka Faroole uu ku tegay dalka Yeman – Radio Daljir
Seteembar 25, 2013 4:16 b 0
Garoowe, September 25, 2013 – Wasaarada warfaafinta ee dowladda Puntland ayaa maanta ka hadashay safarka madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole uu ku tegay dalka Yeman, kadib shirkii dhaqaalaha loogu yaboohay Soomaaliya ee Brussels.
War-saxaafaded ka soo baxay dowladda Puntland ayaa lagu sheegay in socdaalka madaxweynaha iyo xubnaha la socda ay ku tageen Yeman uu muhiimad weyn ugu fadhiyo maamulka iyo dadka reer Puntland, isla markaasna natiijo ka soo baxayso.
?Yeman iyo Puntland waxay wadaagaan xiriir adag oo dhinaca Diinta, Amniga. Ganacsiga, iyo xiriirka Taariikheed ee gunta dheer ah.? ayaa lagu yiri war-saxaafadeed uu ku saxiixnaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Axmed Sheikh Jaamac.
Warqada faahfaahisay safarka madaxweyne Faroole ee Yeman kana soo baxday wasaaradda warfaafinta ee Puntland ayaa ciwaan looga dhigay erayga ?Arbacada ee arrigtida Puntland? sidoo kale waxaa lagu xusay in dadka reer Puntland iyo dadka yeman la lahaayeen xiriir ganacsi oo qoto-dheer iyo ganacsigii Boosaaso iyo Al-Ashcar.
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo wefdi uu hugaaminayo ayaa maalmo ka hor gaaray dalka Yeman halkaas oo ay kulamo kula qaadanayaan madaxda sar sare ee xukuumada Sanca.